Haddii aad naftaada sameysid ama aad la shaqaynayso lamaane, waxaan jeclaan lahaa in aan soo bandhigo afar qaybood oo talo ah oo aan helay gaar ahaan caawimaadkayga shaqadayda. Labada qeybood ee ugu horreeya ee talo-bixinta waxay khuseeyaan dhammaan tijaabooyinka, halka labada labaad ay aad u yaryihiin tijaabooyinka da'da-dijitaalka ah.
Talaabadeyda ugu horeysa ee ah markaad tijaabinayso waa inaad ka fikirto inta ugu badan ee suurtagal ah kahor intaan xogta la ururin. Tani waxay u muuqataa mid u muuqda in cilmi-baarayaashu ay caadaysteen inay tijaabiyaan tijaabooyinka, laakiin waxay aad u muhiim u tahay kuwa ay caadeysteen inay la shaqeeyaan ilaha xogta waaweyn (arag cutubka 2). Iyada oo ilahaas oo kale ah badi shaqada ayaa la qabtaa kadib markaad hayso xogta, laakiin tijaabooyinku waa kuwa soo horjeeda: inta badan waa in la sameeyaa ka hor intaadan ururin xogta. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee aad adigu kugula wareegi karto si taxadar leh kahor intaanad uruurin xogta waa inaad abuurto oo aad iska diiwaangeliso qorshaha horudhaca ah ee tijaabadaada taas oo aad asal ahaan u qeexayso falanqaynta inaad sameyn doonto (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .
Qeybta labaad ee talobixinta guud waa inaan tijaabin hal shay oo keliya, oo sidaas awgeed, waa inaad tixgelisaa samaynta taxane taxane ah oo xoojin kara midba midka kale. Waxaan maqalay tan sida istaraatijiyada armada ; halkii ay isku dayi lahaayeen in ay dhisaan hal dagaal oo waaweyn, waa inaad ku dhistaa maraakiib farabadan oo leh awood dheeri ah. Noocyada noocyada kala duwan ee tijaabooyinka waxay caadi yihiin cilminafsiga, laakiin waxay yihiin naadir meelo kale. Nasiib wanaag, kharashka yar ee tijaabooyinka dijitaalka ah ayaa ka dhigaya sahammo badan oo tijaabo ah.
Marka la eego taariikhda guud, waxaan hadda jeclaan lahaa inaan soo jeediyo laba qaybood oo talo ah oo si gaar ah u ah qaabeynta tijaabooyinka da'da digital-ka ah: samee xogta qiimaha badhaxa qiimaha (qaybta 4.6.1) oo dhisaan anshax ahaan habkaaga (qaybta 4.6.2).